Ngamunye wethu uyazi kahle ukuthi ukubhema kuyingozi. Ukubhema kuyimbangela yezifo eziningi ezingagcina ziholela ekufeni. Sonke siyazi ukuthi wonke umzimba uhlupheka ngokubhema: amaphaphu ethu abe mnyama kusuka ku-tar ne-nicotine, ehlala kuwo, amazinyo aphenduka aphuzi futhi aphule kancane kancane. Ngaphezu kwalokho, ukubhema kuholela ekugugeni kwasekuqaleni, isikhumba siqala ukubukeka kabi: ububala obuphuzi, imibimbi, i-pallor, izibungu ngaphansi kwamehlo, ukuphefumula okubi, iminwe ephuzi. Ngakho-ke ungasusa kanjani umkhuba omubi - ukubhema?
Futhi-ke, ake ucabange ukuthi unemifanekiso emihle, elula, enempilo futhi ephumelelayo yokufunda kwi-intanethi, ukususa kanjani iphunga elimnandi, indlela yokugcoba amazinyo akho, ukuthi wenzeni ukuqeda imibimbi. Kule njongo, sichitha imali eningi, isikhathi, sisebenzise imaski ebusweni, sithenga ama-creams okunyusa amanzi, amazinyo abamhlophe nokunye okuningi ukubuyisela ukuhlanza nokuqala kwasekuqaleni. Kodwa indlela yokususa umkhuba omubi wokubhema, abambalwa bethu bacabanga, babonisa ukwehluleka kwethu kwangaphandle emvelweni omubi kanye nesigqi sokuphila, ngaphandle kokucabanga nhlobo ngempande yazo zonke izinkinga kwelinye. Ukuze ulondoloze ubusha balo, ubuhle, inhlalakahle, amazinyo amhlophe kanye nephunga elimnandi, sekuyisikhathi sokuyeka ukubhema. Ngizokwenza iseluleko esithile sokukwenza lokhu. Kulula ngempela.
Yiqiniso, ukukhipha i-nicotine emzimbeni kunzima kakhulu. Isidingo sansuku zonke somuntu ku-nicotine siyasiqhubezela ukukhanya ugwayi omusha. Kunomuthi omkhulu wemithi ehlose ukwanelisa isidingo somzimba wethu ku-nicotine. Zinezibalo ze-nicotine, kodwa azikho ezinye izingxenye ezimbi ezisegayini. Odokotela kanye nososayensi bakholelwa ukuthi, ngakho-ke, umuntu kulula ukuqeda ukulutha kwe-nicotine. Ngakho-ke, kumalungiselelo enemithi yokulahla ukuxhomeka kwe-nicotine ukukhathazeka: i-lozenges, i-plasters, i-spray, i-chewing elastic, i-inhaler nelinye. Yiqiniso, lena enye yezindlela zokususa umkhuba omubi - ukubhema. Kodwa, isikhathi eside kulolu hlobo oluthathelwa ukwelashwa ngeke uhlale. Imithi iqukethe u-2 mg we-nicotine nokuningi, lokhu, okuyiqiniso, lokhu kukuvumela ukuba ukhethe okukhethwa kukho kokuthola umthamo we-nicotine. Kodwa, ha, ah, ukususa ukuxhomeka komuntu emzimbeni kagwayi, abashintshayo be-nicotine, abakhulumeli umuntu ngokuthembela kwengqondo. Ukuze wenze lokhu, kukhona okuthiwa, ama-cigarette substitutes.
Ososayensi bakhetha ngokukhethekile imvelo, okuthiwa i-phytocagarette, equkethe amakhambi kuphela nemithi yokwelapha. Lokhu kugwayi cishe akulimazi, kodwa, ngokusho kwabaningi engangibajwayele abazama ukuyeka ukubhema nayo, kuyinto enhle kakhulu ukunambitha futhi ngokushesha kubangela isifiso sokubhema ugwayi ovamile. Akuyona indlela engcono kakhulu yokukhipha umkhuba omubi - ukubhema. Esigabeni esifanayo, okuthiwa, i-cigarette kagesi. Kubonakala sengathi ugwayi ovamile kusuka epaketheni, kodwa wenziwe ngepulasitiki kanye nokugcwaliswa kobuchwepheshe obuqili. Umuntu obhemayo ofuna ukukhipha lo mkhuba omubi ufaka i-cartridge ekhethekile ngaphakathi kwegwayi e-electronic equkethe i-nicotine, ehlanzekile, engenamakhawulo. Idivayisi enjalo yesimanje ivumela umuntu obhemayo ukuthi angabhubhisi umzimba wakhe nabanye. Ngaphezu kwalokho, umusi ovela kugwayi onjalo ujabule, ongabangela abanye ukucasuka. Manje, umuntu akagcini nje ukwanelisa isifiso sakhe, ukubamba okuthile ezandleni zakhe, kodwa futhi uhlangabezana nokuzwa okufanayo nokubhema ugwayi we-elekthronikhi. Impendulo enkulu kuphela ukuthi amaklayriji kagwayi kagesi ayabiza kakhulu. Le ndlela yokuyeka ukubhema izokubiza kakhulu.
Ukuze bayeke ukubhema, ababhemayo abaningi basebenzisa izithako zemvelo nokuvuselela ukudla ukuze basuse umkhuba omubi wokubhema. Lezi zidakamizwa zihlanganisa: izithako zokudla, i-phyto-tea, amakhambi okwelapha, i-homeopathy. Lezi zidakamizwa zisiza umuntu owayekade ebhema ukuba abhekane kalula nenqubo yokuphonsa ugwayi, ukubhekana nokucindezeleka nemizwelo. Ukuze ukuyeka ukubhema kalula kufanele kube namandla okwanele, futhi uma kungenjalo, futhi zonke izinsuku ochithe ngaphandle kogwayi ngawe kufana nokufa. Futhi ngosizo lwama-sedative yemvelo, uzoyinciphisa umsebenzi wakho kanye nesiphetho ngenkathi uphonsa ugwayi.
Indlela enhle kakhulu futhi yesimanje yokuqeda imikhuba emibi ingukuthi i-acupuncture noma, njengoba kubizwa nangokuthi, i-acupuncture. Ngosizo lwezinaliti ezikhethekile, udokotela usebenza ezingxenyeni ezihlukene zesikhumba sesiguli. Ngendlela yokuqhuba izinaliti zamanje, okunikeza ukucindezeleka kwemizwa, edlula kuwo wonke umzimba ebuchosheni, ukuthi lowo muntu angeke ashiye. Lena yindlela yokuyeka ukubhema inemiphumela emihle. Abantu abangu-5 kwabangu-10 bayeke ukubhema ngemuva kokuhamba ngezinqubo zochungechunge lwe-acupuncture. Into kuphela, lokhu ukwelashwa kuzokubiza kakhulu. Kodwa, indlela yokukhipha umkhuba omubi - ukubhema, ukukhishwa kwesikhumba kuthatha indawo yokuqala.
Abaningi ababhemayo abadinga usizo badinga usizo odokotela abanobuchwepheshe abakwazi ukubeka umuntu esimweni sokuxoshwa nokugqugquzela ukuthi abasafuni ukubhema. Ngezikhathi zokucindezeleka, umuntu obhemayo ufundiswa ukuthi akafuni ukubhema, akathandi ugwayi kanye nephunga le-nicotine. Isiguli esiphupha ukukhipha umkhuba onobungozi nokulimazayo, ngemuva kwe-hypnosis, kuneluleka ukuba uhlanganyele ekuzivocavoca okuphefumulayo, ngalezo zikhathi lapho efuna ukubhema. Ngaphezu kwalokho, kusiza ukuqeda isifiso sokubhema, ukuvocavoca okuphefumula kuthinta kahle izitho zokuphefumula. Ungenza ukuvivinya umzimba ngokuphefumula nganoma iyiphi indlela yokuphonsa ugwayi.
Indlela elula yokuyeka ukubhema.
Umlobi odume waseMelika u-Alain Carr unikeza indlela yakhe yokuyeka ukubhema. Wabhala incwadi ngemva kokufunda ukuthi yikuphi abantu abayeka ukubhema. Umsebenzi wakhe uvuselela, usekela, ukhuthaze, usize futhi ululeke umuntu obhemayo ngenkathi enquma ukukhipha lo mkhuba omubi. Indlela ka-Allen Carr yokuqeda ukuxhomeka kwe-nicotine yaziwa kabanzi emhlabeni jikelele. Emazweni amaningi, kunezikhungo ezikhethekile ezivuliwe ukusiza abantu abafuna ukuqeda lo mkhuba omubi. Ngakho-ke, uma usabhema, funda incwadi ka-Allen Carr ethi "Indlela Elula Yokuyeka Ukubhema."
Ngakho-ke, nendlela yokuphonsa umkhuba onobungozi noyingozi, sibheke njengalokhu, manje kufanele siqaphele ezinye izici zale nkinga enkulu. Okokuqala, kuyasiza wena ukuqonda ukuthi kungani udinga. Kungaba ngcono kanjani ukubheka ukuzizwa kangcono, hhayi ukuhogela ugwayi, ukuze amazinyo akho abe mhlophe futhi? Kubalulekile ukuthi ubhale phansi zonke izikhathi ezihle ephepheni. Bafunde ngokucophelela, futhi, njalo uma unesifiso sokubhema, thola leli qabunga bese ulibuka. Zizilungiselele empumelelweni. Ziqiniseke ukuthi ungakwenza lokhu. Izigidi zabantu ziyeka, uphonsa.
Amathiphu ezitolo ezithengi
Kufanele ngibeke kuphi i-aquarium ku-feng shui
Isinkwa sesiFulentshi nge jam kanye nobhanana
Ikhekhe ikhekhe ikhekhe
Khetha umsebenzi owudingayo ngokujulile
Oatmeal ku ukhilimu omuncu
Zokupheka zokupheka, inkukhu ebhiya
Okudingeka ukwenze ukuze uhle futhi ulungiswe kahle
Ukuxilongwa ngezicathulo. Yini lezi zicathulo ezingakusho?
Isitayela sezingubo zeCoco Chanel
U-Elena Temnikova waphinde washaqeka ngokwedlulele
Indlela yokuziphathisa indoda enkosikazi